वीर अस्पतालले नक्सा स्वीकृत नगरी भवन बनाउदैं गरेको खुलासा (भिडियोसहित) - TV Annapurna
राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान अध्ययन संस्थान वीर अस्प्तालल नक्सा पास नगरी ९ तले भवन निमार्ण थालेको छ । अहिले सञ्चालनमा रहेको वीर अस्पतालको उत्तर तर्फ बन्न लागेको भवन निमार्णका नक्सा स्वीकृत नलिई निर्माण थालेको खुलेको हो । भवन निमार्णका लागी गएको ६ महिनादेखि निरन्तर काम भए पनि भवन निमार्णको लागी प्रारम्भिक चरणमा लिनुपर्ने नक्सापास भने अहिलेसम्म नलिएको काठमाडौँ महानगरपालिकाका वार्ड नम्बर २७ का अध्यक्ष चिनियाँमान बज्राचार्यले बताए । बज्राचार्यले भने ४० फिट जग खनेर २६ फिटमा २ तला जमिनमुनि र ७ तला जमिनमाथि गरी ९ तले भवनका लागि थालिएपनि भवन बन्ने वडा कार्यालयलाई भने थाहा छैन ।
स्थानीयलाई समेत आंतकित गर्नेगरि थालिएको निर्माणले स्थानीयको ढल तथा मंगालसमेत थुनिएको उनको भनाई छ । स्थानीयहरूको गुनासो पश्चात् स्थलगत निरीक्षण गर्दा भवन निर्माण गर्दा लिनु पर्ने नक्सा पास तथा सिफारिस महानगरपालिका बाट नलिएको देखिएकाले कारबाहीका लागी महानगरलाई पत्र लेखिसकेको वार्डअध्यक्ष बज्राचार्यले टिभी अन्नपूर्णलाई बताए । महानगरको नक्सा हेर्ने विभागको समेत संयोजक रहेका बज्राचार्य भन्छन् ः अस्पताललाई नक्सा खै भनेर सोध्दा, छ भन्छ तर देखाउन मान्दैन । एक पटक त नक्सा गोप्य हो देखाउन मिल्दैन भन्यो । यति ठुलो संरचना बनाउँदा किन नक्सा स्वीकृत नगरेको भन्ने प्रश्नमा चिकित्सा शास्त्र अध्ययान संस्थान वीर अस्पतालका उपकुलपति डा. गणेश गुरुङले भने सबै प्रक्रिया पुरा गरेर काम थालेको जवाफ दिए । गुरुङले भने वीर अस्पतालको भवन निमार्ण केन्द्रीय परियोजना अन्तर्गत हो । सोही अनुसार हामीले सहरी विकास तथा भवन निमार्णबाट सबै प्रक्रिया पुरा गरेर काम थालेका हौँ । भवन निमार्णको नक्सास्विकृत बापत महानगरपालिकालाई तिर्नुपर्ने महसुल समेत तिरिसकेका छौ त्यसबाहेक महानगरपालिका र वाडमा गर्नुपर्ने केही हुन्छ भन्ने मलाई थाहा छैन डा. गुरुङले भने । सरकारी भवनको नक्सा, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले तयार गर्ने हो । अहिले नक्सा पास बापतको महसुलसमेत महानगरमा बुझाएकाले यसले प्रक्रिया गरेको हुनुपर्छ । निर्माणधीन भवनको नक्साको जिम्मा लिएका सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर मच्चाकाजी महर्जनले नक्सा स्वीकृत अब दर्ता गर्ने चरणमा जाने बताए । महर्जनले भने मैले यस अघि नै दर्ता गर्न भनेको थिएँ तर दर्ता भएको रहेनछ अब प्रक्रियामा पठाउँछु । त्यसो त भवन निमार्णले यस आसपासका स्थानीयले आफूहरूलाई असर गरेको भन्दै यसको विरोध जनाएका छन् । स्थानीय उदय ताम्राकारले भवन निमार्णका लागी खनिएका जगमा आफू लगायत ११ घरको ढल पुरिएको स्काभेटरका कारण भूकम्पले चर्किएका भवनमा जोखिम बढेका गुनासो गरे । अर्का स्थानीय शरण कमाचार्यले तीस फिट गहिरो खाल्डो निर्माण भए पछि आसपासमा रहेको घरहरू कम्पन्न भई चिरापर्ने सम्म समस्या देखिएको बताए । तर वीर अस्पताल प्रशासनले भने भवन निर्माणको क्रममा प्रत्येक आठ आठ इन्च मा १२ मिटरको पायल राखेका राखेकाले छिमेकको घरहरूमा असर नगर्ने बताएको छ । उपकुलपति डा.गुरुङले भने अस्पताल देशैभरका बिरामी सँग जोडिएको विषय हो । निर्माणधिन भवनका कारण स्थानीयलाई समस्या हुनुहुँदैन यसमा हामी सतर्क छौँ । तर निहित स्वार्थ बोकेर निमार्ण कार्य बिथोल्ने चेष्टा हुनु भएन ।
महिनामा ५५ पटकसम्म चरम यौन आनन्द लिन सक्छन् महिलाले, यस्तो छ अध्ययन
सरकारले किन गर्यो हुलाक बैंक खारेज ?